I-DA- BW19002 iphosa i-cookware yentsimbi 2020 intengiso eshushu
Iipani zokuthaya zemveli zinokupheka ngokungalinganiyo, zihlala zikhokelela kwinyama ekunzima ukuyitya. Entsha kwaye iphuculwe! Iihenjisi zokudibanisa ezahluliweyo ukulungiselela ukucoca ngokukhawuleza kunye nokucoca ngokulula. Yenza intsimbi umahluko kunye ne-skillet yakho entsha esasaza ubushushu ngokulinganayo ngokupheka kakuhle, inyama ethe-ethe-ethe. Imnandi kwaye
ithatha indawo encinci kunentsimbi yombane.
I-DA-BW24002 iphosa i-cookware yentsimbi ye-2020 yentengiso eshushu eyenziwe e-china
I-DA-BW32001 i-ironware yokupheka i-DISA
I-DA-BW18001 yentsimbi yentsimbi ye-2020 iyathengiswa